Ragga guska weyn galmada ma kaga fiicanyihiin kuwa kale? | Raganimo University
Ragga guska weyn galmada ma kaga fiicanyihiin kuwa kale?
February 8, 2019~1 minute
Waa su'aal aad la yaabi doonto jawaabta ay dumarku ka bixiyeen marka la waydiiyay. Dumarka inta badan waxay sheegeen in jawaabtu ay tahay MAYA. Dumarka inta badan waxay sheegaan in cabirka guska ninka uusan door weyn ku lahayn raaxada galmada balse muhiimadu ay tahay sida uu u isticmaalo qalabkiisa.
Dumarku waxay sheegeen in galmada ugu raaxada badan ay ka helaan ninka guskiisa dhexdhexaadka yahay balse leh xirfad iyo dulqaad. Taasi oo ah nin uu si fiican u yaqaano sida haweenka loo qanciyo. Haddii uu ninku yahay mid waqti badan ku qaadan kara sariirta isaga oo aan biyo-bixin isla markaana diyaar u ah in uu tijaabiyo waxyaabo kala duwan dumarka aad ayay u jecelyihiin, xitaa haddii uusan lahayn gus weyn.
Dumarku waxay necebyihiin ninka guska weyn ee isku haysta in guskiisa keliya uu u shaqeynayo, ee aan isticmaalin maskaxdiisa. Oo doonaya in uu dhowr daqiiqo intuu boobsiiyo galmada marka uu biyo-baxo meesha isaga carara. Waxay ka door bidayaan midka qalabka yar balse leh dulqaadka oo muhiimada siinaya raaxada iyo qancinta gacalisadiisa. Haweenku aad ayay u qiimeeyaan ninka ka fikiraya raaxadooda ee aan isaga keliya iska fikirayn.
Dumarka qaar xitaa waaba ka cararaan ragga aad u guska weyn, maadaama ay gabadhu aad ugu xanuunsan karto. Waliba haddii uusan ninku ahayn mid taxadar leh. Hadaba haddii aad tahay nin ilaahay ku barakeeyay gus weyn waxaa muhiim ah in aad ku darsato dulqaad iyo farsamo si aad dumarka u qanciyo.